Royal Caribbean Group dia miantso ny Lehiben'ny mpiaro ny tontolo iainana, sosialy ary fitantanana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Royal Caribbean Group dia miantso ny Lehiben'ny mpiaro ny tontolo iainana, sosialy ary fitantanana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Silvia Garrigo, filoha lefitra zokiny ary tompon'andraikitra ambony momba ny tontolo iainana, sosialy ary fitantanana (ESG)
Royal Caribbean Group no voalohany amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo mitonona mpitarika lehibe natokana manokana ho an'ny ezaka tontolo iainana, sosialy ary fitantanana.
Ny Royal Caribbean Group dia manamafy ny fahavononany hihoatra ny lavitra ho an'ny fahasalamana sy fahombiazan'ny planetantsika sy ny olontsika.
Silvia Garrigo dia hiditra ao amin'ny orinasa 28 Jiona ho filoha lefitra zokiny sy Chief Officer momba ny tontolo iainana, sosialy ary fitantanana.
Garrigo dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny rafitra ESG manerana ny orinasa sy ny paikady maharitra ho an'ny Royal Caribbean Group.
Royal Caribbean Group dia nanambara androany fa i Silvia Garrigo dia hanatevin-daharana ny orinasa 28 Jiona ho filoha lefitra ambony sy Chief of Environmental, Social and Governance (ESG), izay nitory tamin'ny filoha sy CEO Richard Fain.
"Faly aho manana an'i Silvia hanatevin-daharana hanampy anay hanohy ny fitarihana sy ny fanoloran-tena ho an'ny ESG," hoy i Fain. “Nanoro hevitra orinasa maro i Silvia momba ny paikady sy fandaharanasa ESG misy tanjona ary azo ampiharina, ary azony tsara ny fifandraisan'ny olana ara-dalàna, ara-politika, ara-tsosialy ary ara-tontolo iainana amin'ny sehatry ny asa manerantany. Mitondra azy any Vondrona Royal Caribbean manamafy ny fanolorantenantsika tena hihoatra ny avo ho an'ny fahasalamana sy ny fahombiazan'ny planetantsika ary ny olontsika. ”
Royal Caribbean Group no voalohany amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay nanome anarana mpitarika zokiolona natokana manokana amin'ireo ezaka ireo, mampiseho ny “fanahy mitarika sy ny fitarihana mpisava lalana amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo ary ny fomba itananantsika ny tenantsika amin'ny fenitra ambonimbony kokoa,” hoy i Fain.
Garrigo dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny rafitra ESG manerana ny orinasa sy ny paikady maharitra ho an'ny Royal Caribbean Group hanohanana ny tanjon'ny orinasa lehibe ary koa ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa stratejika sy ny fifandraisana amin'ireo mpiray antoka. Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny ekipa mpitarika, izy koa dia hitarika ny fampidirana ny olana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy amin'ny fitantanana sy ny fitantanana ny risika ataon'ny orinasa.
"Zaraiko ny soatoavina sy ny vinan'i Richard sy ny komity mpanatanteraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ary omem-boninahitra aho ho anisan'ny kolontsain'ny orinasa iray izay naneho faharetana sy fahavononany hiverina matanjaka kokoa," hoy i Garrigo. "Miatrika fampitomboana ny fanantenana amin'ny fahombiazan'ny ESG sy ny fanaovana tatitra izahay, ary faly aho hiaraka amin'ny ekipa iray izay efa manana firaketana mafy momba ny asan'ny ESG ary fanoloran-tena hatry ny ela mba hanao fiovana tsara."
Miaraka amin'ny fanandraman-javatra manome torohevitra ara-dalàna sy maharitra ho an'ny mpitantana ambony amin'ny orinasa tantanan'ny besinimaro, Garrigo dia manatevin-daharana ny Royal Caribbean Group avy amin'ny Millicom International, izay izy no tompon'andraikitra tamin'ny famolavolana sy fanatanterahana ny tontolo iainana Millicom momba ny tontolo iainana, sosialy ary fitantanana ary tetika fampiasam-bola ara-tsosialy. Talohan'izay, Garrigo dia mpanolotsaina zokiolona momba ny lalàna sy fitoniana maharitra ho an'i Morrison Foerster sy Cuba Strategies Inc. Ary nandritra ny folo taona mahery dia nitana andraikitra ara-dalàna isan-tsokajiny sy zokiolona tao amin'ny Chevron Corp. izy izay nitarihany ny orinasa momba ny politika sy ny fomba fiasa eo amin'ny orinasa. ary koa ny fandraisan'anjaran'ny tompon-trano amin'ny olan'ny ESG.
Garrigo dia miasa ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny University of California Berkeley Ivon-toeram-pandraharahana sy fiarahamonina Boalt Law School; ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny University of Miami Business School; Vondron'asan'ny American Bar Association's Human Rights Working Group; ary ny Vondrona mikambana momba ny zon'olombelona. Nahazo Doctor Juris avy amin'ny University of Miami School of Law ary Bachelor of Arts in Psychology avy any amin'ny College Boston.